China KF3015T IPG Raycus High Speed ​​CNC Sheet Metal Pipe Tube Fiber Laser Cutting Machine Nrụpụta na Ụlọ Ọrụ |Knoppo
Igwe mpempe akwụkwọ CNC na Tube Fiber Laser Cutting Machine KF3015T
Akụrụngwa na-ezute ihe nhazi akụkụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ, ịrụ ọrụ ziri ezi kwụsiri ike.Ịhọrọ ike kachasị mma na nhazi nkwado, ihe akụrụngwa akụrụngwa zuru oke zuru oke.Ịnabata echiche ngwa anya nke ọma iji melite ịrụ ọrụ nke ịkpụ.Mbelata ọsọ ọsọ dị elu, ntinye inyeaka na nbudata na mmepụta nke ọma na-ebelata ụgwọ ọrụ ọrụ.Ka ọ dị ugbu a, ejirila igwe na-egbutu laser mee ihe na ngwa elektrọnik, eletriki, ngwa ngwa igwe, lithium ume ọhụrụ, nkwakọ ngwaahịa, anyanwụ, LED, ụgbọ ala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Mpaghara ịkpụ akwụkwọ
Ogologo ịkpụ tube
Iji flake graphite nkedo nkedo, ike tensile kacha ala bụ 200MPa.Carbon dị elu
ọdịnaya, elu mkpakọ ike na elu siri ike.Mkpịsị ujo siri ike na iyi
iguzogide.Mmetụta okpomọkụ dị ala na nghọta ọdịiche ihe ndina na-ebelata mfu nke akụrụngwa n'iji,
yabụ izi ezi igwe nwere ike idowe ogologo oge, na enweghị nrụrụ na okirikiri ndụ.
SWITZERLAND RAYTOOLS Laser isi
akpaghị aka-elekwasị anya
Na-adabara na ogologo ebe dị iche iche, nke a na-achịkwa usoro njikwa ngwá ọrụ igwe.Focal point ga-akpaghị aka gbanwee na ọnwụ usoro iji nweta kacha mma ọnwụ mmetụta dị iche iche ọkpụrụkpụ Ibé akwụkwọ metal.
Hapụ aka gị.Sistemu eji arụ ọrụ na-achịkwa ogologo anya.Ọ dịghị anyị mkpa ịme ụkpụrụ ntuziaka, nke na-ezere njehie ma ọ bụ mmejọ nke ọrụ ntuziaka kpatara.
Nabata nkà na ụzụ ọkụ ọkụ Switzerland, oge nkwụsịtụ dị mkpụmkpụ, 90% nke oge perforation na-echekwa;Switzerland Lightning jikọtara ya na Raytools kwalitere usoro ọhụrụ nke mere na perforation adịghị emetụta àgwà ihe onwunwe ma nweta nkwụsị zuru oke na akụkụ kachasị mma;na-azọpụta ịcha gas na ọkụ eletrik, na-azọpụta ego.
Mgbe ị na-edochi dị iche iche ihe ma ọ bụ dị iche iche ọkpụrụkpụ mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ntuziaka lekwasịrị anya laser isi kwesịrị ịgbanwe focal ogologo aka, nnọọ adịghị ike;auto-elekwasị anya laser isi nwere ike na-agụ usoro nchekwa parameters na-akpaghị aka, nnọọ oru oma.
Ịbawanye perforation nlebara anya ogologo, iche iche ịtọ perforation Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo na ịcha Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo, welie ọnwụ ziri ezi.
Wuru n'ime okpukpu abụọ mmiri oyi Ọdịdị nwere ike hụ na mgbe niile okpomọkụ nke collimating na-elekwasị anya components,zena anya lenses ekpo oke ọkụ na ịgbatị ọrụ ndụ nke anya m;Na-abawanye oghere nchebe collimation na lens nchebe gbado anya, jiri nlezianya chebe ihe ndị bụ isi.
CHUKWU ONWE ONWE YA
Igwe ọkụ eletrik na-akpaghị aka, mbanye DC moto claw, clamping moto current na-enwe mmetụta, mgbanwe na kwụsie ike, njigide dị obosara na ike njigide buru ibu.Ọkpụkpọ ọkpọkọ na-adịghị emebi emebi, ịgbanye ọkpọkọ ngwa ngwa na ọkpọkọ, arụmọrụ kwụsiri ike.The chuck size dị nta, ntụgharị inertia dị ala, na ike ịrụ ọrụ dị ike.Igwe ọkụ eletrik na-eche onwe ya, ọnọdụ nnyefe gia, arụmọrụ dị elu dị elu, ogologo ndụ ọrụ na ntụkwasị obi ọrụ dị elu.
Ọrụ KF3015T Nlereanya
Usoro inye nri inyeaka
Nkwalite na mbelata nke tebụl rola ndị enyemaka na-ebelata ike esemokwu n'etiti akụkụ na tebụl na-arụ ọrụ, na-eme ka nbudata na ibutu dị mfe karị.
Nchekwa njem ọgụgụ isi
Nyochaa nso nso a na-arụ ọrụ nke crossbeam na ịcha akụkụ, na-arụ ọrụ n'ime oke igwe.Nkwenye ugboro abụọ nke mmachi a kapịrị ọnụ na-eme ka akụrụngwa na nchekwa nkeonwe dịkwuo mma, na-ebelata ihe egwu dị.
Usoro mmanu mmanu akpaaka
Usoro mmanu mmanu akpaaka na-enye oge na ntinye mmanụ mmanụ maka akụrụngwa iji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nke dị elu, ma nwee ọrụ nke mkpu na-adịghị mma na ọkwa ọkwa mmiri mmiri.Usoro a na-abawanye nke ukwuu ịkpụzi izi ezi ma na-agbatị ndụ ọrụ nke usoro nnyefe nke ọma!
Enyemaka ọgụgụ isi dịpụrụ adịpụ WIFI
Nzaghachi n'ezie zuru ụwa ọnụ; Na-enye nyocha na nchọpụta nsogbu ozugbo.
Ọgbọ ọhụrụ nke nchekwa na-esote modul
Isi laser idebe anya na mpempe ọrụ na-egbutu usoro nwere ike ibelata ihe egwu egwu.Ọ ga-akwụsị ịcha mgbe efere na-agbakọta.Nchekwa na-esote modul na-ebelata ọnụego ihe mberede ma na-eme ka arụ ọrụ dị mma.
Sistemụ mkpu nwere ọgụgụ isi
Usoro ahụ ga-amalite mkpu na-adịghị mma zuru oke ma na-agbanye ya na interface site na ebe nchịkwa mgbe akụrụngwa na-adịghị mma.
Ịchọta akụrụngwa adịghị mma tupu oge eruo yana ibelata ihe egwu zoro ezo nwere ike ime ka nrụpụta ngwa ngwa rụọ ọrụ nke ọma.
Enyemaka gas dị ala ala mkpu ọrụ.
Na-enye nchọpụta nrụgide ozugbo, na-ebugharị ozi na-adịghị mma mgbe uru nrụgide dị ala karịa mmetụta mbelata kacha mma na nkenke.Gbaa mbọ hụ na ịbelata arụmọrụ, izi ezi na oge nke nnọchi gas.
Nke gara aga: Ọnụ ego China Plasma CNC Beam Cutting Machine
Osote: Nkwalite ụlọ ọrụ China 2020 ama ama Cut 3-3 obere CNC Plasma Steel Mpempe akwụkwọ na Cutter Pipe
cnc laser ọnwụ igwe maka ọrịre
cnc laser ọnwụ igwe mpempe akwụkwọ metal
cnc laser metal ọnwụ igwe
cnc laser metal ọnwụ igwe price
cnc laser ígwè ọnwụ igwe
cnc metal ọnwụ laser
cnc metal ọnwụ igwe laser
CNC metal eriri laser ọnwụ igwe
Abụọ Eji Metal Pipe na Plate Fiber Laser Cutt...
Akpaaka metal Tube na Pipe Fiber Laser Cutti ...